Akụkọ - Transformer Global Market Report 2022: Atụrụ a na-atụ anya iru $ 220.4 ijeri na 2026 na CAGR nke 23.3% - amụma ogologo oge ruo 2031
DUBLIN, Mee 20, 2022–(WIRE Azụmahịa)–ResearchAndMarkets.com na-agbakwụnye “Akụkọ Azụmahịa Global Transformers 2022, site na ụdị mgbanwe, ụdị na onye ọrụ njedebe” na-akọ na onyinye ResearchAndMarkets.com .
A na-atụ anya na ahịa mgbanwe mgbanwe ụwa ga-eto site na ijeri $ 75.89 na 2021 ruo $ 95.51 ijeri na 2022, na mmụba kwa afọ (CAGR) nke 25.9%.A na-atụ anya ahịa ahụ iru $ 220.4 ijeri na 2026, na-eto na CAGR bụ 23.3%.
Ndị isi egwuregwu n'ahịa mgbanwe bụ ABB, General Electric Company, Schneider Electric SA, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Corporation, Siemens, SGB-SMIT na Hammond Power Solutions.
Nkeihe ntụgharịahịa na-agụnye ire mgbanwe mgbanwe na ọrụ ndị yiri ya nke a na-eji na-emepụta ike, nkesa, na mgbanwe pụrụ iche. Ndị na-agbanwe agbanwe na-ebufe ike site n'otu sekit gaa na ọzọ. na-agafe n'etiti sekit abụọ na sekit dịpụrụ adịpụ.
Ụdị ndị bụ isi nke ihe ngbanwe bụ ndị na-agbanwe ike nankesa transformers.A na-eme mgbanwe ọkụ bụ ụdị ihe ngbanwe a na-eji na-ebufe ọkụ eletrik n'etiti generator na sekit isi nke nkesa. Na usoro nkesa ike, a na-eji ihe ndị a na-eme ka a na-ejikọta nzọụkwụ-elu na mgbada voltaji. ndị na-agbanwe mgbanwe dị ala na ndị na-agbanwe ihe dị elu maka ịba uru, ebe obibi na azụmahịa, ndị ọrụ njedebe ụlọ ọrụ.
Eshia Pasifik bụ mpaghara kachasị ukwuu maka ahịa mgbanwe na 2021. Western Europe bụ mpaghara nke abụọ kachasị ukwuu maka ahịa mgbanwe mgbanwe. Mpaghara kpuchie na akụkọ a gụnyere Asia Pacific, Western Europe, Eastern Europe, North America, South America, Middle East na Africa.
Amụma gọọmentị dị mma maka ịbawanye ọkụ eletrik ga-enye aka na uto nke ahịa mgbanwe mgbanwe n'ime oge amụma. Mba dị iche iche gburugburu ụwa na-emejuputa atumatu dị iche iche iji mee ka ọkụ eletrik dị na mba ha. Dịka ọmụmaatụ, na 2019, gọọmentị India malitere otu mba otu Grid. atumatu, nke bu n'obi inye steeti niile ọkụ eletrik dị ọnụ ala.
Ntugharị ndị a ga-abawanye ahịa maka ndị na-agbanwe ọkụ eletrik n'ime oge amụma. N'ịkwalite ọchịchọ maka ndị na-agbanwe agbanwe, obere na ike dị elu, nke atumatu gọọmentị dị mma na-akwado, ga-enwe mmetụta dị mma na uto nke ahịa mgbanwe.
Akwụsịghị ọnụ ahịa akụrụngwa bụ isi ihe na-egbochi ahịa n'ichepụta transformer.Akwụsịghị ahụ bụ n'ihi mgbanwe dị na ọnụ ahịa akụrụngwa dịka igwe, ọla kọpa na mmanụ crude.A na-ejikarị ígwè na ọla kọpa eme ihe ngbanwe.
Mmụba tarifu na akụrụngwa dị ka nchara na ọla kọpa emewo ka mgbanwe ọnụahịa ka njọ, si otú a na-egbochi uto nke ahịa ndị na-agbanwe ọkụ eletrik. Dịka ọmụmaatụ, na February 2020, gọọmentị US kpebiri ịbawanye tarifu mbubata na nchara na aluminom site na 25. % na 10%, n'otu n'otu. Ọnụ ahịa na-arị elu ebutewo ụba ego eji arụ ọrụ, si otú a na-egbochi uto nke ahịa ahụ.
Ahịa mgbanwe na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-enwere onwe ya na nke na-achịkwa onwe ya.
Ha na-enye kpọmkwem ike dị mkpa ma na-anabata mgbanwe site na usoro a na-akpọ njikarịcha voltaji. Ha na-enye ọkụ eletrik dị mma maka ngwá ọrụ eletrik, si otú a na-ebelata ikuku griin haus na ọkụ eletrik. Dịka ọmụmaatụ, na 2021, Hitachi ABB Power Grids na-arụkọ ọrụ na ya. Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) na oru ngo mmepe smart grid nke gọọmentị na-eduzi.
Òtù abụọ ahụ ga-emekọ ihe ọnụ iji kwalite mmepe nke teknụzụ siri ike nke mgbanwe (SST), nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nnyocha Energy na-eduzi ma na-akwado National Research Foundation of Singapore. Ọrụ ahụ bụ akụkụ nke Singapore's Energy Grid 2.0 initiative, nke aims. iji kpụzie usoro grid ọgbọ na-esote ma gbanwee njikwa ike site na ijikọta ọtụtụ ike ike n'ime otu netwọk smart nke na-arụ ọrụ nke ọma, na-adigide na ike.
6.1.Global Transformer Market, Ụdị Ngbanwe, Akụkụ akụkọ ihe mere eme na amụma, 2016-2021, 2021-2026F, 2031F, ijeri USD
6.2.Ahịa Transformer zuru ụwa ọnụ, Nkeji site n'ụdị, akụkọ ihe mere eme na amụma, 2016-2021, 2021-2026F, 2031F, ijeri USD
6.3.Ahịa Transformer zuru ụwa ọnụ, ngalaba onye ọrụ njedebe, akụkọ ihe mere eme na amụma, 2016-2021, 2021-2026F, 2031F, ijeri USD
7.1.Global Transformer Market, Site na mpaghara, akụkọ ihe mere eme na amụma, 2016-2021, 2021-2026F, 2031F, ijeri USD
7.2.Ahịa Transformer zuru ụwa ọnụ, Site na Obodo, Akụkọ na amụma, 2016-2021, 2021-2026F, 2031F, Ijeri USD
SINGAPORE (Reuters) - Ọnụ ahịa mmanụ agbatịkwuru uru na Tuesday mgbe European Union kwenyesiri ike ibelata mbubata mmanụ sitere na Russia, na-agbakwunye na ahịa ahịa nke ejirilarị ịrị elu na-arị elu tupu oge ịkwọ ụgbọ ala na US na Europe.tightries.US West Texas Intermediate (WTI) crude future is at $118.25 a barrel, up $3.18 from Friday's. Ndị isi EU kwenyere n'ụkpụrụ iji belata 90% mbubata mmanụ sitere na Russia na njedebe nke 2022, na-edozi esemokwu na EU. mmachi kacha sie ike na Moscow kemgbe Hungary wakporo Ukraine ọnwa atọ gara aga.
N'oge na-adịbeghị anya Bengen kwuru na iwu ahụ, nke a na-eji kemgbe 1990, kwesịrị inwe ike ijide ọ gwụla ma enwere "ọnọdụ dị oke egwu onu oriri".
Ezi ahụmịhe azụmaahịa zuru ụwa ọnụ nke Saxo! Nweta ihe karịrị ahịa 60 zuru ụwa ọnụ yana ịzụ ahịa karịa ngwaahịa 40,000.
Ngwunye wiring dị umeala n'obi, ihe dị ọnụ ala nke na-ejikọta eriri ọnụ, aghọwo ihe otiti na-atụghị anya ya nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala. Ịnweta akụkụ ụgbọ ala emebiwo agha na Ukraine, ebe obibi nke nnukwu akụkụ nke mmepụta ụwa, ebe a na-eji eriri waya. A na-emepụta ya maka ọtụtụ narị puku ụgbọ ala ọhụrụ kwa afọ. Ọdụdọ siri ike nwere ike ime ka atụmatụ ụfọdụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala nwere ike ịkwaga na ọgbọ ọhụrụ nke ọkụ ọkụ, igwe na-arụ ọrụ wiring nke e mere maka ụgbọ ala eletrik, dị ka ajụjụ ọnụ a gbara na ihe karịrị ụlọ ọrụ iri na abụọ. ndị egwuregwu na ndị ọkachamara.
(Reuters) - Ọnụ ahịa mmanụ rịgoro karịa $ 121 otu gbọmgbọm na Mọnde, na-akụda elu ọnwa abụọ, ka China belatara mgbochi COVID-19 na ndị ahịa na-atụ anya na European Union ga-emecha nweta nkwekọrịta machibido mbubata mmanụ Russia.Brent crude maka July, nke na-agwụ na Tuesday, kwụrụ $2.24, ma ọ bụ 1.9%, na $121.67 otu barrel.US West Texas Intermediate (WTI) ọdịnihu crude ruru $1.99, ma ọ bụ 1.7%, na $117.06 otu gbọmgbọm site na 18.03 GMT, na-agbatị uru siri ike nke izu gara aga.
Amụtara m banyere tebụl ọkọnọ na ịchọ ihe, mkpụrụ kwa acre, nyocha bụ isi, nyocha ọnụọgụ, na nyocha teknụzụ.Na 1970s, ọnụ ahịa ego sitere na usoro ọkọnọ na mmemme egbe na bọta Washington. Ọnụ ahịa mmanụ na ngwa ahịa ndị ọzọ dị ka ọla kọpa gbagoro, mana n'ịgbachitere ọnụ ahịa, ọnụ ahịa gbanwere ụzọ ngwa ngwa wee gbaa ndị isi ala ọkụ.
Zute ndị ọkachamara usoro usoro ama ama na nzukọ ọmụmụ na isi okwu na-abịanụ. Gaa na webụsaịtị maka ozi ndị ọzọ.
Ọnụ ego ọnụ ahịa na ihe ndị na-enye nsogbu na-eme ka ọ bụrụ onyinyo dị n'ahịa ndị na-ere ahịa. Echela na ndị mmadụ ka na-eri nri ọbụna ka ọnụ ahịa na-ebili, na Target mbak adawo 26.9% n'ime ọnwa gara aga, ebe Walmart mbak adawo 16% n'ime otu oge. Walmart na Target nwere ikike n'usoro ọkọnọ.
(Bloomberg) - Shanghai ga-ekwe ka ndị mmadụ na-agagharị n'efu na mpaghara ndị e chere na ọ dị obere na Covid-19 n'ime obodo wee mepee okporo ụzọ na njem ọha na-amalite na Wednesde, bụ isi nzọụkwụ na mbọ ya iji bulie mkpọchi ọnwa abụọ. Ọtụtụ BloombergStocks Reading Mbelata ego ka ọ na-enwe nchegbu ọnụ ahịa: Ahịa WrapNATO kwesịrị iche echiche ugboro abụọ tupu ịnakwere Finland na Sweden Biden zutere Powell iji kparịta ọnụ ahịa akụ na ụba ụwa ebe kachasị egwu n'ụwa iji fega nkezi ihe egwu.
Ịdị mfe na nghọta nke atụmatụ itinye ego nke Oracle of Omaha butere nloghachi nke afọ 57 nke 20.1% kwa afọ.
(Bloomberg) - Mmepụta na China nke ndị ọrụ ụgbọ ala atọ kacha ukwuu nke Japan dara site na ọnụọgụ abụọ n'April, na-egosi etu mkpọchi Shanghai siri metụta ndị na-emepụta ụgbọ ala kachasị ukwuu n'ụwa.: Ahịa Kechie NATO kwesịrị iche echiche ugboro abụọ tupu ịnakwere Finland na Sweden
Ejikọtara oke ahịa Eshia na Tuesday ka akụkọ na-ekwu na mbelata nke ngalaba nrụpụta China na-ebelata ka mmachi mgbochi nje na azụmaahịa na Shanghai na Beijing kwụsịrị.
Asọmpi European maka inye gas Russia egwu egwu maka atụmatụ ise nke mbubata gas nke Australia ka ha na-asọ mpi maka akụrụngwa dị oke egwu, na-ebuli ohere nke ụkọ ọkọnọ na Australia nke ndị mmadụ bi na ndịda ọwụwa anyanwụ n'ime afọ abụọ na-esote. Mba ndị dị ka France, Germany na Netherlands ga- ọ dị mkpa ịbubata gas gas (LNG) iji dochie gas pipeline sitere na Russia, bụ nke a kwadoro n'oge esemokwu na Ukraine. Ndị ọrụ Europe na-ekpochapụ ihe nchekwa na regasification nkeji (FSRU) dị mkpa iji gbanwee LNG gaa na gas, na-ahapụ ntakịrị ihe. Ime ụlọ maka Australia ibubata oru ngo iji mejupụta oghere ọkọnọ gas a na-atụ anya ya site na 2024.
BENGALURU (Reuters) - Onye na-arụ ụgbọ ala India Tata Motors Ltd abịanyela aka n'akwụkwọ iji nweta ụlọ ọrụ Ford Motor Co. na-emepụta ụlọ ọrụ na mpaghara ọdịda anyanwụ Gujarat ka ọ na-achọ ịkwalite mmepụta ụgbọ ala eletrik. Onye nwe Jaguar Land Rover ejirila India mee ihe. nascent electric ụgbọ ala ahịa, nke gọọmenti na-agbalị na-eto eto site n'inye ụlọ ọrụ ijeri dollars na-akpali akpali.Tata kwuru na ọ ga-etinye ego na ọhụrụ ígwè ọrụ na ngwá na ụlọ ọrụ site na ya electric ụgbọ ala nkewa, ma na-atụ anya na ụlọ ọrụ na-enwe ike mmepụta ikike nke mmepụta nke. nkeji 300,000 kwa afọ mgbe arụchara ọrụ.
(Bloomberg) - Brent gbagoro karịa $ 120 ka China belatara mgbochi mgbochi nje na European Union chepụtara atụmatụ machibido mbubata crude Russia. Ọtụtụ BloombergStocks na-enweta uru ka mmụba na-atụ egwu ịrị elu: Ahịa WrapNATO kwesịrị iche echiche ugboro abụọ tupu ịnakwere Finland na Sweden Biden. izute Powell iji kwurịta mmetụta nke onu oriri na akụ na ụba Ebe kachasị dị ize ndụ n'ụwa na-efe efe na nkezi Ọdachi otu ugboro n'afọ ndị isi EU na-emegide mmachibido iwu nke ọtụtụ mmanụ Russia n'ihi agha Putin na-ebili 1.9%
TOKYO (Reuters) - Mmepụta ụlọ ọrụ ndị Japan dara nke ukwuu n'April ka mkpọchi COVID-19 nke China na ọgba aghara ka ukwuu na-emebi ndị na-emepụta ihe, na-eme ka atụmanya akụ na ụba dabere na azụmaahịa. dị ka ndị na-azụ ahịa na-akwalite mmefu ego mgbe gọọmentị belatara usoro mgbochi ọrịa na-efe efe, na-eguzogide nrụgide sitere na mmụba ọnụahịa buru ibu nke nwere ike imerụ ọchịchọ ahụ. Mmepụta ụlọ ọrụ dara 1.3 pasent na Eprel site na otu ọnwa tupu mgbe ahụ, data gọọmentị gosipụtara na Tuesday, dị ka mmepụta nke ihe dị ka akụkụ eletrọnịkị na igwe mmepụta dara nke ukwuu.
Mmeghachi omume nke ndị na-ere ahịa na $115.80 na $115.56 na mbụ na Mọnde nwere ike ikpebi ntụzịaka nke nkwekọrịta ọdịnihu nke August Brent crude.
Ebe nchekwa gas kacha ukwuu na Britain ga-emepegharị n'ime ọnwa ole na ole iji nyere aka mee ka nsogbu ike dị mfe, dịka atụmatụ anyị na Kwasi Kwarteng kparịtara.
SNAP na New York na-enye ndị ọrụ na-enweghị ego, ndị agadi na ndị nwere nkwarụ aka ịzụrụ nri.A na-akwụ ụgwọ uru kwa ọnwa na akaụntụ SNAP jikọtara ya na kaadị EBT, nke nwere ike ịbụ…
Mbelata nke ọrụ mmepụta ihe na China belatara na Mee ka mmachi COVID-19 belatara n'isi ụlọ ọrụ nrụpụta, mana mmachi mmegharị na-aga n'ihu na-atụba agụụ na mmepụta, na-ebuli nchegbu banyere uto akụ na ụba na nkeji nke abụọ. PMI) bilitere na 49.6 na May site na 47.4 n'April, na-eti atụmanya nke 48.6 na ntuli aka Reuters, National Bureau of Statistics (NBS) kwuru na Tuesday. Mbelata nke ụlọ ọrụ ndị China na-emetụta ahịrị mmepụta na nnukwu akụ na ụba ndị ọzọ na Asia, yana Japan na South Korea abụọ na-akọpụta mbelata dị ukwuu na mmepụta.
Ụfọdụ ọrụ ndị dị n'akụkụ nwere ike itinye narị dollar ole na ole kwa ọnwa na ego gị, ma ọ bụ ị nwere ike ịrụ ọrụ na ọrụ ndị a na-amaghị nke ọma nwere ike ime ihe ruru $1,000 (ma ọ bụ karịa) kwa ọnwa. Lee: akụkụ 22…
Mgbe ọ nọsịrị n'okpuru akara ahụ maka ọtụtụ izu, ether gbakọtara karịa 10% n'ime awa 24 iji kụọ $ 2,000 na Asia n'ụtụtụ Tuzdee. Ethereum na-ere ahịa na $ 1,985 na oge mgbasa ozi. Lee isiokwu metụtara ya: Bitcoin, Ethereum, Crypto na Lows in 2022 Facts Facts nke abụọ kasị ukwuu n'ụwa gbadara na mbelata nke $1,721 […]